नेतामय जिल्ला नुवाकोटः कांग्रेस एक्लै भिड्ने, कम्युनिष्ट तालमेलको तयारीमा | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
नेतामय जिल्ला नुवाकोटः कांग्रेस एक्लै भिड्ने, कम्युनिष्ट तालमेलको तयारीमा
राप्रपा र नयाँ शक्तिले ठूलाको जितमा प्रभाव पार्न सक्ने
नुवाकोट, वैशाख १५ गते । काठमाडौंसँग जोडिएको नुवाकोट नेताहरु धेरै भएको जिल्ला हो । राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशरण महत र कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको गृहजिल्ला यही नुवाकोट हो ।
एमालेका महेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल पनि नुवाकोटबासी हुन् । माओवादी नेता हितबहादुर तामाङ पनि नुवाकोटबासी हुन् । माओवादीका स्वर्गीय नेता पोष्टबहादुर बोगटी पनि नुवाकोटकै थिए ।
नेताहरुको जिल्लाका रुपमा परिचित नुवाकोटको चुनावी माहौलको चर्चा गर्दा अन्य जिल्लामा भन्दा यहाँको परिवेश अलि भिन्न छ । प्रमुख तीन दलमध्ये कांग्रेस र एमाले अझै गृहकार्यमै छन् भने माओवादी केन्द्र सातवटा तहमा उम्मेदवार टुंग्याएर प्रचार-प्रसारमा केन्दि्रत भएको छ ।
जिल्लामा १२ वटा स्थानीय तह छन् । यसमध्ये दुई नगरपालिका छन् । जिल्लाभरि ८८ वटा वडा कार्यालय छन् । जिल्लामा १ सय २८ मतदान स्थल छन् । २ सय ४० निर्वाचन केन्द्र तोकिएका छन् । कुल मतदाता संख्या १ लाख ८५ हजार ७ सय ८२ छ । उनीहरुले जिल्लाभरिबाट ४ सय ६४ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछन् ।
कांग्रेसको दाबी नुवाकोटमा सबै जितिन्छ
कांग्रेसले १२ वटै स्थानीय तहमा विजयी हुने दाबी गरेको छ । जिल्ला नेता रमेश महतले अघिल्लो संविधानसभामा तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हासिल गरेकाले स्थानीय तह पनि जित्ने लक्ष्य राखेको बताए । तर, कांग्रेसले आजसम्म उम्मेदवार सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । उम्मेदवारको आकाक्षी बढी हुँदा केही समय लागेको महतको भनाइ छ ।
नुवाकोट कांग्रेसमा सबैभन्दा चरमस्तरको गुट राजनीतिक छ । जिल्लाका नेतादेखि कार्यकर्तासमेत केसी पक्ष र महत पक्षमा विभाजित छन् । त्यसो हुँदा कांग्रेस नुवाकोटको एक गुटले अर्को गुटलाई कहिलै मत नदिने र कांग्रेसको पक्षमा भएका मतदाता समेत विभाजित हुने सम्भावना रहेको छ ।
काग्रेस नेता महत त्यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि दुवै पक्षमा सहमति जुटाएर उम्मेदवार उठाउने प्रयास भएको बताउँछन् ।
कांग्रेसले नुवाकोटमा चुनाव जित्नका लागि कुनै महत्वाकांक्षी योजना नल्याउने बताएको छ । उसले केन्द्रको अधिकार जिल्लामा प्रयोग गर्न सक्ने उम्मेदवार उठाउने दावी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासमा गाउँ वडा केन्द्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर ठूला ठूला सपना नदेखाउने नेता महतले बताए । उनले भने, हामीले नुवाकोटलाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्ने सोचेका छौँ तर घोषणा पत्रमा चाँही समेट्दैनौँ ।
कांग्रेसले जिल्लाको विकासका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा नदीनालालाई देखाएको छ । त्रिशुली नदीको किनारबाट गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्ने र त्यसबाट आर्थिक समृद्धी हासिल गर्ने मुख्य लक्ष्य देखाएको छ । यस्तै पर्यटन विकासलाई पनि जोड दिने बताएको छ ।
जिल्ला नेता महतले भने, पर्यटन विकाससँगै फिल्ड स्टुडियो निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । यस्तै राजधानीसँगैको जिल्ला भएकाले शैक्षिक हव निर्माण गर्नेछौँ । त्यसअन्र्तगत इञ्जिनियर, मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना हुनेछ ।
कांग्रेसले जिल्लामा कुनै पनि पार्टीसँग चुनावी तालमेल नहुने बताएको छ । अघिललो निर्वाचनमा तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसले जितेको र अहिले पनि एक्लै सबै तह जित्ने स्थिति रहेकाले तालमेलको आवश्यकता नरहेको कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेसले एमाले र एमाओवादीलाई समान प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरेको बताएको छ ।
माओवादी केन्द्र के भन्छ ?
माओवादी केन्द्रले नुवाकोटलाई बेरोजगार मुक्त जिल्ला बनाउने र रोजगार दिन नसक्दासम्म बेरोजगार भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै चीनसँगको केरुङ नाकालाई ध्यान दिदै नुवाकोट जिल्लालाई विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै ट्राउण्ड माछा पालनलाई थप व्यवसायिक बनाउने घोषणा गरेको छ ।
विकासको एजेण्डा व्यवसायिक कृषिमा अनुदान, बेरोजगारको अन्त्य
माओवादी केन्द्रले १२ स्थानीय तहमध्ये ६ गाउँपालिका र एक नगरपालिकाको उम्मेदवार टुंग्याएको छ । ८८ वडामध्ये अधिकाशंमा वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारको नामावली टुंग्याएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
माओवादीले शिवपुर गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, किस्ताङ गाउँपालिकाको सबै उम्मेदवार टुंग्याएको छ । यस्तै नेघाङ गाउँपालिकाको प्रमुखमा रामेश्वर खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
यस्तै तारकेश्वर गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवार राजेन्द्र न्यौपानेलाई बनाएको छ । ककनी गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवार मान बहादुर तामाङलाई बनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको विदुर नगरपालिकाको मेयरका लागि लीलानाथ न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै सुभद्रा नेपाललाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । उपमेयर सुभद्राका श्रीमान नयाँशक्ति पार्टीको तर्फबाट बेलकोटमाई नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार छन् ।
माओवादीले जिल्लाको अर्को नगरपालिका वेलकोटमाइ नगरपालिकाको भने उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रले नुवाकोटमा दुई नगरपालिका र ५ गाउँपालिका आफूले जित्ने दाबी गरेको छ । जिल्लामा कांग्रेसको कार्यकर्ता गाउँगाउँमा विभाजित भएकाले जित्ने संख्या बढ्न सक्ने माओवादीको विश्लेषण छ ।
माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पनि चुनावी तालमेलबारे छलफल अघि सारेको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडाले भने, हामीले ७ निश्चित गरेका छौँ, एमालेसँग तालमेल हुँदा केही संख्या बढ्छ ।
माओवादीले नुवाकोटमा एमालेसँग तालमेलका लागि सकारात्मक प्रयास भएको बताएको छ । तर, दुवै पार्टीमा आकांक्षीको संख्या बढी रहेकाले व्यवस्थापनमा अप्ठेरो रहेको माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।
एमालेलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो
जिल्लामा एमालेले पनि उम्मेदवार घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । आकांक्षी कार्यकर्ता उल्लेख्य हुँदा समय लागेको एमालेको जिल्ला अध्यक्ष नारायण खतिवडाले बताए ।
नुवाकोटमा एमाले तेस्रो पार्टी हो । ०६४ सालमा दुई क्षेत्र माओवादी र एक क्षेत्र कांग्रेसले जितेको थियो । ०७० मा भने तीनवटै क्षेत्र कांग्रेसले जितेको छ । मत परिणाममा कांग्रेसपछि माओवादी केन्द्र र एमाले तेस्रो स्थानमा छ ।
संविधानसभा ०७० को मतपरिणामका आधारमा नुवाकोट जिल्लामा एमाले तेस्रो शक्ति हो । कांग्रेस पहिलो र माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा छ । एमाले जिल्लामा तेस्रो शक्ति भएकाले उसले चुनावी तालमेलको नीति लिएको छ । तर निश्चित भइसकेको छैन । अध्यक्ष नारायण खतिवडाले भने, स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार सबै पार्टीसँग तालमेल गर्ने नीति लिएका छौँ ।
एमालेले उम्मेदवारको टुंगो लागेपछि मात्र चुनावी प्रचारमा जुट्ने बताएको छ । चुनावको एजेण्डा पनि त्यसपछि तय गर्ने एमाले नेता बताउँछन् । जिल्ला अध्यक्ष खतिवडाले भने, हामी स्थानीय तहको एजेण्डा बनाउने जिम्मा हरेक स्थानीय तहका निर्वाचन कमिटीलाई दिएका छौँ । अरु एजेण्डा पार्टी केन्द्रको घोषणा पत्र अनुसार हुनेछ ।’
अन्य पार्टीको अवस्था
नुवाकोटमा प्रमुख तीन दलपछि राप्रपा शक्तिमा छ । अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपा चौथो शक्ति बनेको थियो । तर, राप्रपाबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी विभाजन भएर गएसँगै जिल्लाको राप्रपा पनि विभाजित बनेको छ । राप्रपाको केही निश्चित गाउँपालिकामा मात्र प्रभाव रहेको छ । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा प्रमुख तीन मध्ये कुनै पार्टीलाई जिताउन राप्रपाको भूमिका रहन्छ ।
नयाँ शक्ति पार्टी पनि जिल्लामा यस्तै भूमिकामा छ । नुवाकोटमा नयाँ शक्तिको पक्षमा जनमत कमजोर भए पनि मतपरिणाममा भने एकअर्कोलाई जिताउने वा हराउने भूमिकामा रहेको छ ।
एक्ला एक्लै चुनाव लडेको स्थितिमा नयाँशक्तिले सघाएको पार्टीले जित्ने सम्भावना बढी रहेको स्थानीय नेताहरु बताउँछन् ।- अनलाइनखबर
4/28/2017 02:33:00 PM